Company Profile - Shanghai Phoenix ingxubevange Co., Ltd
Umzimveliso Welding Material
Shanghai Phoenix ingxubevange Co., Ltd. iye yenziwa okukhethekile metal, ingxubevange, nezinto nzima-to-fumana kwezi marike ukususela 1998 Thina isifundo esinamandla esenziwa amandla elektroniki nickel kwibakala, ngqo, metal eliyinjubaqa kunye ingxubevange. Yokuvelisa izinto aphezulu umgangatho efumaneka iintlobo ezifana: bha, intonga, iphepha, ipleyiti, umcu, ucingo, kunye alumuniyam eliqinileyo. Yokuvelisa ezi zinto e ezininzi yokulinganisa, nobubanzi / ubude, kunye nemiqathango ukunikezelwa ngokukhawuleza.
Yethu elithile le ekucombululeni iingxaki ulawulo inventri abathengi bethu. Xa ufuna izinto imfuyo eqhelekileyo ngokukhawuleza, sinokuba ukuba ithumele ngexesha elifutshane. Ukuba imfuneko lakho eziphathekayo lincinane kakhulu ukuba babe nomdla kubalimi ezinkulu, singakwazi unikeze. Xa une ngxaki yezobugcisa ephathelele yokwanda magnetic, eliyinjubaqa okanye ezinye izicelo izinto eziphakamileyo zobugcisa, iingcali ku-endlwini zethu okunokukunceda ukuzisombulula iingxaki zakho. Ukuba une kwemfuneko engaqhelekanga, umzekelo ingxubevange, ubungakanani okanye ibakala, intengiso bethu abantu abanolwazi kakhulu kwaye akuncedise. Ukuba unayo izinto ngenjongo ekhethekileyo ukuba awukwazi ukufumana, siza kusebenzisa inkonzo yethu Locator nokuba uzame ukuvelisa okanye ukufumana yona.
Siye kwakhona ngeenkqubo ezahlukeneyo ukuze akuncede yokuhlengahlengisa inkqubo yakho lemveliso. Inkqubo yethu sithengise ibeka uluhlu kwi esandeni sakho, ukunciphisa iindleko zakho kunye nokuphucula inkonzo yakho. Kunokuba bagawule umthwalo wakho yolawulo zikwazi ukutsala izinto njengoko kufuneka oko, yaye ibika ukusetyenziswa uze ulungise uluhlu rhoqo ngenyanga. Inkqubo yethu lelonani Yesiko Ungagcina ixesha nemali yakho ngokuthatha umyalelo lokusila, wayibeka kwi-inventri bethu athumele kuwe ubuninzi ufuna njengoko ucela uncedo kubo. Ngoko unako nkulu isivuno sakho okanye ukugcina ixesha lemveliso uyala izinto kwiimfuno zakho ethile.
Phoenix aluminiyamu IIMPAWU:
1) Umthuthi ngokutsho loMxokelelwano yoBulunga International (ISO9001)
2) ukumelana Esitalini kunye nobude elide-ubomi
3) Mill Isiqinisekiso uvavanyo luya kubonelelwa kunye nempahla ngolwandle
4) ucingo Ubukhulu Uluhlu: iirozeti .0.018-10mm: 0.05- 0.2 * 2-6mm imicu: 0.05-5 * 5-250mm, bar: 10 ~ 300mm, sheet: 0.7mmT * 1200mm W
5) iindlela Good nokupakisha ukugcina iimpahla akukho monakalo ngexesha ukunikezelwa
6) Elungiselelweyo uphawu yokuthumela, ukupakisha, inkonzo OEM
Kutheni indlela engcono thina:
• Ukukhokela umenzi esekelwe nickel ingxubevange
• Amava iminyaka umenzi ngqo 20 '
• amaxabiso uKhuphiswano ilothe-ixesha elifutshane ukuze Products ingxubevange Umzimveliso ezisekelwe
• Inkxaso eyiyo kwaye womelele zobugcisa kunye inkonzo ebalaseleyo yokuthengisa.
• iziko uvavanyo Advanced ngokomzimba imichiza
• Isethi epheleleyo kwinkqubo yolawulo lomgangatho
• Iqela Professional R & D kunye nabahloli QA & QC
• Unxibelelwano olufanelekileyo (iiyure ezingama-48 quote elikhokelayo ixesha).
• amandla emveliso Kudlule
• 12 zemvume National
© Copyright Shanghai Phoenix ingxubevange Co., Ltd. - 2010-2017: All Rights Reserved. - Amandla ngu Globalso.com